शिव सत्याल काठमाडौं, ३० भदौ
गत बुधबार (२५ भदौ) अपरान्ह सवा १ बजेतिर बालाजुको नयाँ बसपार्क पुग्यौं । पेट्रोल पम्पनजिकैको एउटा सानो घरमा रहेको लोत्सेको कार्यालयमा केही मान्छेसँग कुरा गर्दै भेटिए इन्जिनीयर दीपक कुँवर ।
नयाँ बसपार्क कस्तो बन्दै रहेछ भनेर जानकारी लिन आएको सुनायौं । उनले बसपार्क यस्तो बनाउँदै छु, यस्तो बन्नेछ भन्ने बेलीविस्तार लगाऊलान् भन्ने हाम्रो अनुमान थियो । कुँवर नयाँ बसपार्क बनाउने जिम्मा पाएको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् ।
तर, उनी हामीसँग धेरै बेर गफिएनन् ।
‘मैले त राम्रो हुँदैछ, राम्रो गरिरहेको छु, भनिहाल्छु नि ! तपाईंहरूसँग समय छ भने पूरै बसपार्क घुमेर हेर्नुस्, जस्तो देख्नुहुन्छ, त्यस्तै लेखिदिनुस्, यसमा मेरो कुनै आपत्ति हुनेछैन,’ कुँवरले हाम्रो अनुमानभन्दा फरक जवाफ दिए ।
‘हुन्छ’ भन्यौं । उनले प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई हामीसँग पठाएँ । घुम्न थाल्यौं बसपार्क । लिन थाल्यौं सूचना र जानकारी ।
अस्तव्यस्त, फोहोर र टहरैटहराले घेरिएको प्रदूषित स्थलजस्तो देखिने नयाँ बसपार्कको स्वरुप अहिले बदलिएछ । सफा र सुन्दर देखिन थालेछ ।
देशकै एक मात्र राष्ट्रिय बसपार्कको रूपमा रहेको नयाँ बसपार्क पछिल्लो समय व्यवस्थित हुँदैछ ।
काठमाडौं महानगरपालिका– २६ मा पर्ने १ सय ६१ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको बसपार्कलाई व्यवस्थित बनाउन यसको पश्चिमतर्फ विष्णुमति कोरिडोर निर्माण भएको छ । विष्णुमति कोरिडोर निर्माणका लागि बसपार्कले झण्डै १० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ ।
२०५६ सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख केशव स्थापित र लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका अध्यक्ष गेहेन्द्रबहादुर कार्कीबीच सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत सम्झौता गरेर नयाँ बसपार्क सञ्चालन गरिएको थियो । वि.सं. २०७१ सालदेखि सो प्रालिको स्वामित्व कुँवरले लिएका हुन् ।
अहिले बसपार्कभित्र बाहिरी जिल्लाबाट आएका बस र उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका बसलाई पार्किङका लागि बेग्लाबेग्लै पार्किङ स्थल बनाइएको छ ।
नयाँ बसपार्कभित्र पेट्रोल पम्प, टिकट काउण्टर, ग्यारेज, खाजा घर, कान्तिपुर मल, नवनिर्मित लोत्से मल, ट्राफिक प्रहरी वृत्त र महानगरीय प्रहरी प्रभाग गोंगबु छन् । सुविधासम्पन्न सपिङ मलको रूपमा निर्माण सम्पन्न हुन लागेको लोत्से मल सात तल्लाको छ ।
ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको नयाँ बसपार्क सफाइका लागि २३ मजदुर दैनिक खटिइरहेका छन् । सुरक्षाका लागि ३६ जना सुरक्षा गार्ड कार्यरत छन् । त्यस्तै, सुरक्षाकै लागि २८ वटा सीसी क्यामेरा पनि जडान गरिएको छ । बत्तीका लागि ५ वटा सोलार जडान गरिएको छ भने यात्रुका लागि ४१ वटा कुर्सीको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
लोत्सेले चालक, सहचालक र यात्रुको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर ग्राण्डी हस्पिटलसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य उपचार तथा परामर्श केन्द्र पनि स्थापना गरेको छ । उक्त केन्द्रले निःशुल्क परामर्श तथा प्राथमिक उपचार गर्ने गर्छ ।
स्वास्थ्य केन्द्र स्थापनाको पृष्ठभूमि पनि संवेदनशील छ ।
‘बाहिरबाट आएका एक यात्रुलाई उच्च रक्तचापको समस्या रहेछ, उनी यहाँ ढले, म त्यहीँ थिएँ । ट्याक्सी खोज्दाखोज्दै उनको देहान्त भयो । उनलाई बचाउन सकिएन, यो विषयले मलाई साह्रै पिरोल्यो, अनि ग्राण्डीसँग कुरा गरेर यहाँ निःशुल्क क्लिनिक राख्ने व्यवस्था मिलाएँ,’ कार्यकारी अध्यक्ष कुँवरले यसको पृष्ठभूमि यसरी सुनाए ।
बसपार्कभित्रको शौचालय अपाङ्गमैत्री पनि छ । लोत्सेले २५ लाख रुपैयाँको लगानीमा बनाएको सो शौचालयभित्र ह्वीलचियरसमेत लैजान मिल्छ । शौचालय सफा छ ।
लोत्सेले सो बसपार्क वि.सं. २१०२ सम्म सञ्चालन गर्न पाउने गरी सम्झौता भएको छ । सो बसपार्कमा ८ सय बस पार्किङ गर्न सकिने गरी बनाइँदैछ । नागढुंगाबाट अहिले दैनिक करिब १ हजार २ सय बस बाहिरिने गरे पनि नयाँ बसपार्कबाट दैनिक ३ सय ५० वटाजति बस बाहिरिन्छन् । नयाँ बसपार्कमा चाँडै नै ई–टिकेटिङको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
हाल लोत्सेले काठमाडौं महानगरलाई वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिर्दै आएको छ । वि.सं. २०५६ सालमा सम्झौता हुँदा वार्षिक ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व तिर्ने भनिएको थियो । वि.सं. २१०२ सम्म पुग्दा वार्षिक राजस्व रकम वृद्धि भएर करिब ४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । लोत्सेले बनाएका सबै संरचना स्वतः सरकारको स्वामित्वमा जानेछन् ।
नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा पहिला ७ सयवटा टहरा थिए । अहिले ती सबै टहरा हटाइएको छ । बसपार्कको सौन्दर्य कायम राख्न टहरा हटाइएको हो ।
‘कसैले आइफल टावरलाई पृष्ठभूमिमा देखाएर फोटो खिचायो भने त्यो ठाँउ फ्रान्स रहेछ भनेर स्वतः थाहा हुन्छ, हाम्रो देशको एउटा मात्र बसपार्कमा त्यस्तै पहिचान झल्कने कुनै विशेष संकेत वा चिन्ह होस् भनेर हामी लागिरहेका छौं, यो बसपार्कमा आउनेले नाक थुन्ने वा हैरानी व्यहोर्ने होइन, सेल्फी खिच्ने ठाउँको रूपमा पहिचान बनाओस् भनेर लागेका छौं,’ कार्यकारी अध्यक्ष कुँवरले भने ।
बसपार्कको टर्मिनल भवन खाली गराइएको छ । सो भवनको तल्लो तल्लामा ४० वटा रेष्टुरेन्ट थिए भने माथिल्लो तलामा ७० वटा रेष्टुरेन्ट । अहिले यी सबैलाई हटाइएको छ । खानाको गुणस्तरमा गुनासो आएपछि रेष्टुरेन्ट बन्द गराइएको लोत्सेले जानकारी दियो ।
लोत्सेअन्तर्गत ७ वटा भवन छन् । नयाँ बनाइएको अण्डरग्राउन्ड पार्किङमा ६५ देखि ७० वटासम्म साना बस अट्छन् ।
बसपार्कमा राखिएका बसले ४ दिनको २७५ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । यस्तै, बाहिर निस्कँदा प्रतिबस १ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । पार्किङमा राखिएको बस यात्रु बोकेर गन्तव्यमा जाने भएपछि बस छुट्ने समयभन्दा आधा घण्टा अगाडि ‘डिपार्चर ट्र्याकमा आउँछन् । अनि यात्रु चढिसकेपछि गन्तव्यतिर लाग्छन् ।
नयाँ बसपार्कमा बालउद्यान, फास्टफुड, सपिङ कम्प्लेक्स, बैंक तथा वित्तीय संस्था, हरित उद्यान, बास बस्ने यात्रुका लागि बसपार्कभित्रै आवासीय भवन तथा मनोरञ्जनका लागि साना सिनेमा घर बनाउने योजना लोत्सेको छ ।
बसपार्क विस्तारपछि ग्रिनबेल्टमा जथाभावी बस पार्किङलाई निरुत्साहित गरिने भनिएको थियो । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अझै पनि गौशाला, कोटेश्वर, तिलगंगा, कलंकीलगायतका स्थानमा ठूलो संख्यामा बस पार्किङ गरिँदै आएको छ । यस्तै, पर्यटक बस अझै पनि नयाँ बसपार्कमा आउने गरेका छैनन् ।
लोत्सेले बसपार्कलाई पारिवारिक वातावरणको स्थल बनाउने पहिलो लक्ष्य राखेको छ । घरजस्तै सुरक्षित र आरामदायी स्थलका रूपमा विकास गरी बसपार्कप्रतिको आममान्छेको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने लक्ष्य लोत्सेको छ ।
कुँवरलाई २०५८ सालमै एउटा ‘पिन्च’ परेको रहेछ । भारतको इलाहावादबाट इञ्जिनीयरिङ गरेका कुँवरलाई मौरिससका साथीहरू भेट्न आएछन् । नयाँ बसपार्क पुगेपछि ती साथीहरूले जनाएको प्रतिक्रियाले आफूलाई नराम्रो लागेको कुँवरले बताए ।
‘हाम्रो राष्ट्रिय बसपार्क यही हो भनेर चिनाउँदा मलाई साँच्चिकै अप्ठेरो महसुस भयो, त्यही भएर यो बसपार्कलाई राम्रो बनाउने मेरो सोच थियो, अहिले काम गर्न पाएँ, मेरा लागि यो साह्रै ठूलो अवसर हो, खुशीको कुरा हो,’ उनले भने ।
निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित कम्पनीले सरकारलाई ३५ प्रतिशतसम्म कर तिर्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले निजीक्षेत्रको उद्योग व्यवसायलाई सरकारले आफ्नो साझेदारको रूपमा स्वीकार गरेर सोहीअनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने बताए ।
‘सरकार भनेको नाफाको ३५ प्रतिशतसम्म प्रतिफल खाने साझेदार हो, उसले लगानी गरेको हुँदैन, व्यवस्थापन हेरेको हुँदैन, नियमन मात्रै गरेको हुन्छ, त्यसले सरकारले निजीक्षेत्रमैत्री नियम कानून ल्याउने र निजीक्षेत्रका समस्या तथा अप्ठेरा सुनेर फुकाउने काम गरिदिनुपर्छ,’ कुँवरले भने ।
त्यसपछि हामी लोत्सेका कार्यकारी अध्यक्ष इन्जिनीयर दीपक कुँवरसँग खास प्रश्नको जवाफ खोज्न लाग्यौं । विशेष गरी रियलस्टेट व्यवसायमा लागेको व्यक्ति, नयाँ बसपार्क बनाउन किन आउनुभयो ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा कुँवरले यस्तो जवाफ दिए–
कुनै देशको बसपार्क, विमानस्थल वा सडक भन्ने कुरा त्यो देशको आधारभूत पूर्वाधार हो । ती कुराहरू चाहिन्छ नै । एउटा इन्जिनीयरको दृष्टिकोणबाट मैले हेर्ने कुरा फरक हुन्छ । राम्रो, सुविधासम्पन्न, यात्रुमैत्री बसपार्क होस् भन्ने मेरो चाहना हो ।
मैले इञ्जिनीयरिङ पढ्दै गर्दा (२०५८ सालतिर) मौरिससका साथीहरू घुम्न नेपाल आएका थिए । उनीहरू भारतको सुनौलीहुँदै नेपाल आएका थिए । नयाँ बसपार्क आएपछि ‘नेपालको राष्ट्रिय बसपार्क यही हो ?’ भन्ने प्रश्न गरे । त्यो बेला नयाँ बसपार्क अस्तव्यस्त अवस्थामा थियो । फोहोरैफोहोरले भरिएको अलपत्र अवस्थामा थियो । उनीहरूको प्रश्नले मलाई एक प्रकारको हीनताबोधजस्तै भयो । बसपार्क पनि यस्तो हुन्छ त भन्ने प्रश्न मनमा उठ्यो ।
त्यसपछि अरु पनि २/३ वटा यस्तै घटना भए । अर्काे एउटा प्रसंग पनि तपाईंलाई सुनाउँछु । मैले ग्राण्डी अस्पताल बनाइसकेपछि मेरा विदेशी साथीहरू ग्राण्डी हस्पिटल हेर्न आए । ग्राण्डी हेरिसकेपछि ‘तिमीहरूको ग्राण्डी हस्पिटल यति राम्रो रहेछ, तर बसपार्कचाहिँ किन यस्तो ? किन यस्तो फोहोर ? किन यति अस्तब्यस्त ?’ भन्ने प्रश्न गरे । यी प्रश्नले मलाई अझ गम्भीर बनायो ।
त्यसपछि ग्राण्डी हस्पिटलमा बिरामी ल्याउने प्रसंगमा बस व्यवसायी केही साथीहरूसँग सम्पर्क भयो । उहाँहरूले पनि हाम्रो बसपार्क ज्यादै अस्तब्यस्त र फोहोर भएकाले केही गर्न सकिन्छ कि भनेर मलाई भन्नुभयो । तीमध्ये केही साथीहरूको यो बसपार्कको पुरानो सञ्चालकसँग केही सम्पर्क रहेछ । पुरानो सञ्चालकसँग लिएर यो बसपार्क सुधार गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भयो ।
मलाई पनि यस्तै लागिरहेको र बस व्यवसायी साथीहरूले पनि यस्तो कुरा गरेपछि केही गरौं भन्ने सोच ममा अझ बढ्यो । त्यसपछि तीन महिनासम्म प्रत्येक दिन बिहान यो बसपार्कमा आएर मैले सर्वे गरें । त्यो बेला मलाई यो बसपार्क साँच्चिकै कुरूप, डरमर्दाे, अस्तब्यस्त, दलालैदलाल, लुटपाट भएको देख्दा साह्रै चित्त दुख्यो । नेपाली मात्रै होइन, विदेशी आउँदा पनि कम्तिमा हिँडडुल गर्न मिल्ने, राम्रो शौचालय भएको, हाइजेनिक खाना खान पाइने, सफा, लुटपाट नहुने खालको बसपार्क त चाहियो नै ।
अति आवश्यक पूर्वाधार भएन भने हामीले जुन नारा दिए पनि, जति चोटि भिजिट नेपाल कार्यक्रम राखे पनि विदेशी पर्यटक आउँदैनन् । हामी पनि देशविदेश घुमिरहेका हुन्छौं । कुनै देशको अनुभव सम्झँदा फेरि त्यो देश नजाऊँजस्तो लाग्छ । अरुलाई पनि यस्तै लाग्छ होला ।
लाेत्से बहुद्देश्यीय प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष कुँवर ।
यस्तो भएपछि मैले पाएको ज्ञान र विज्ञतालाई यो बसपार्कको माध्यमबाट केही सदुपयोग गर्न सक्छु कि भन्ने लाग्यो । यत्रो लगानी गरेर कति फाइदा हुन्छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ । हो, म प्रोफेसनल व्यवसायी हुँ । व्यवसाय गरेपछि प्रतिफलको अपेक्षा त हुन्छ नै । यहाँ धेरै प्रतिफल छैन । लगानी खेर जाने नै पनि होइन । र, यहाँ प्रतिफलभन्दा पनि धेरै आत्मसन्तुष्टि छ । नाम छ । म त्यसैका लागि नयाँ बसपार्क सुधार्न लागेको छु ।
यसपछि भने हामी प्रश्नोत्तरमा यसरी केन्द्रित भयौं ।
तपाईं राम्रोसँग पैसा कमाइरहेको व्यक्ति यस्तो असहज ठाउँमा किन आउनुभएको ?
मेरो सौभाग्य नै भन्नुपर्ला, अहिलेसम्म मैले जति ठाउँमा हात हालें, अधिकांश ठाउँ यस्तै विवाद भएकै ठाउँ छन् । अप्ठेरो र गाह्रो ठाउँ नै पाएँ । सजिलो काम त सबैले गर्छन् । यस्तो अस्तब्यस्त भएको बसपार्क लिएर मैले सुधार गरें भने राज्यलाई केही योगदान पुग्छ र आफूलाई पनि आत्मसन्तुष्टि हुन्छ । जन्मेपछि मरिन्छ । पैसा कमाएर मात्रै केही हुँदैन । समाजले सम्झने काम गर्नुपर्छ । मेरो पुर्खा बलभद्र कुँवरले गर्नुभएको योगदान आज सबैले स्मरण गर्छन् । म पनि यस्तै केही स्मरणीय काम गर्न चाहन्छु । हो, यहाँ धेरै ठूलो चुनौती छ । अप्ठेरा छन् । मेरो भिजन सबैलाई बुझाउन सक्दिनँ । सबैले बुझ्ने प्रयत्न पनि गर्नुहुन्न । म यो कुरामा पहिल्यै तयार थिएँ । यस्ता कुराले म कहिलेकाहीँ दुःखी हुन्छु तर निराश हुन्नँ ।
यो बसपार्क बनाउने क्रममा समस्या आउला, कानूनी चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला भन्नेजस्ता विषयमा तपाईं पहिला नै तयार हुनुहुन्थ्यो, तर, काम गर्ने सिलसिलामा तपाईंले अनुमान नगरेको के कस्ता विषय पाउनुभयो ?
मैले अहिले यहाँ जेजस्ता पूर्वाधार बनाएको छु, अन्त्यमा गएर ती सबै सरकारको नै हुने हो । मैले अहिले गरेको लगानी अन्त्यमा गएर सरकारकै हुने हो । मैले त तोकिएको निश्चित अवधिभित्रमा जति प्राप्त गर्छु, त्यो नै मेरो लगानीको प्रतिफल हो । त्यसैले यहाँ काम गर्ने सिलसिलामा सरकारबाट जेजस्तो सहयोग पाउँछु भन्ने आशा गरेको थिएँ, त्यो पाइनँ ।
मैले यहाँ बनाएको पूर्वाधार भूकम्पप्रतिरोधी छन् । मेरो घर भत्कियो भने मेरो ५ जनाको परिवार सकिने हो । तर, बसपार्कको पूर्वाधार भत्कियो भने दशौं हजार मान्छेको ज्यान जान सक्छ । त्यसैले मैले यसमा कुनै कन्जुस्याइँ गरेको छैन । मैले नाम कमाउनकै लागि यो परियोजनामा हात हालेको हुँ । यो परियोजना मेरो प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो ।
तपाईं यो बसपार्कलाई कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ ?
सम्झौताअनुसार यो बसपार्क अब २६ वर्ष मसँग हुन्छ । मैले सोचेअनुसार काम गर्न पाएँ भने अबको २ देखि ३ वर्षभित्रमा कुनै यात्रु यो बसर्पाकभित्र छिरिसकेपछि ऊ कहाँ जाने, कुन बस चढ्ने भन्नेजस्ता कुरा नठगिईकन यात्रा गर्न पाउँछन् । सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुग्न पाउँछन् । यहाँभित्र छिरेपछि सहज र सुरक्षित रूपमा गुणस्तरीय खाना र बस्न पाउँछन् ।
यात्रु मात्रै होइन, बस व्यवसायी पनि ठगिएका छन् । ट्याटु हानेको र जिम गरेको पाखुरा देखाएर विचौलियाले बस व्यवसायीलाई ठगिरहेका छन् । म यस्तो हुन दिन्नँ । सबै कुरा सूचना प्रविधिमैत्री हुनेछन् । यो बसपार्क सानो भयो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ । अन्य देशका बसपार्क पनि योभन्दा ठूलो हुँदैनन् । योभन्दा सानो नै हुन्छन् ।
अबको ५० वर्षसम्म यो बसपार्कले धान्छ । यसका लागि यो बसपार्कलाई बस आउने र जाने स्थान मात्रै बनाउँछु । बस पार्किङका लागि यातायातको सुविधा भएको ठाउँमा बसपार्क बनाउँछु । त्यो बसपार्कमा गाडी स्टाफका लागि बस्ने, खानेजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने पूर्वाधार बनाउँछु । तर, यसका लागि सरकारले मलाई अनुमति दिनुपर्छ ।
यो बसर्पाकलाई अबको ५० वर्षसम्म पुग्ने बनाउने मेरो सपना हो । त्यो पूरा गर्न सकिन्छ । जुन दिन यो सपना पूरा हुन्छ, त्यो दिन नै मेरा लागि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको दिन हुनेछ ।
तस्वीरहरुः सुशील श्रेष्ठ
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ ३०, २०७६, २२:१७:००
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको टिप्पणी : असामान्य परिस्थितिमा परम्परागत बजेट